Nơi mua sắm quần áo tết 2022 rẻ, đẹp nhất tại TPHCM » Festival Fashion | Kotexpro - Kotexpro
Nơi mua sắm quần áo tết 2022 rẻ, đẹp nhất tại TPHCM » Festival Fashion | Kotexpro
E-Saigon kwiintsuku zokugqibela zenyanga ye-12, kwakungekho ilanga elivuthayo, kodwa endaweni yoko kwakuyimozulu epholileyo ukuba iqonde ngokukhawuleza ukuba i-2022 Lunar New Year iza …
Ngaba iholide yeTet idala ezona mvakalelo zomntu ngamnye xa kuthelekiswa nezinye iiholide zonyaka? Kwi-subconscious yomntu wonke, uNyaka oMtsha weLunar ubaluleke kakhulu. Kwabo bakude nekhaya, wonk’ ubani unecebo lokubuyela kwidolophu yakowabo ukuze aye kubhiyozela uTet, ekhangele phambili ngolangazelelo ukubuyela ekhaya ngokukhawuleza ukuze adibane nentsapho yakhe, adibane nabantu abathandayo kwakhona, aze athethe ngamabali amaninzi emva kokuba bengekho. xesha elide.
Eli ikwalithuba lokujonga emva kwimiboniso yakudala, ixesha lokuhamba ezindleleni zelali, ukujonga iimarike zasemaphandleni, iivenkile zexesha lokukhumbula… Usuku loNyaka oMtsha, usuku lweNtwasahlobo lusuku lokuhlangana kwakhona, kwaye kwakhona Usuku lonikezelo gcina uthando lomntu wonke. Abantu bayathandana, balumkele ukusuka kumagama ukuya kwizijekulo kunxibelelwano, ukuze baneliseke. Eyadini, endle, kwisitrato selali, abantwana bentyiloza benxibe iimpahla ezintsha; Wagoba ngesinye isandla elayita ifirecracker, esinye evale iindlebe zakhe, waphinda watswina xa kuqhushumbe ifirecracker, esasaza iphepha elipinki endleleni ngathi ziipesika zepesika…
Ngokwembono yoobawomkhulu bethu, ukucinywa komlilo ekupheleni konyaka omdala ekuqaleni konyaka omtsha kukugxotha amashwa nokugxotha imimoya engendawo. Ukuva isandi seziqhushumbisi, abantu baziva benemincili, belindele into entsha nebalulekileyo ukuba yenzeke. Ngelishwa, namhlanje i-firecrackers ngosuku lwentwasahlobo iye yaba yinto yexesha elidlulileyo, kodwa isandi se-firecrackers e-Tet sigxininiswe ngokunzulu kwi-subconscious yabantu abaninzi, umbhali weli nqaku ngokwakhe uziva echulumancile njengokuva i-firecrackers. … I-Tet lixesha lokugqiba unyaka omdala ukuhlala emva kwaye ujonge emva koko sele kwenziwe, ishishini elingagqitywanga, impumelelo kunye nokufunda kwiimpazamo kwaye wenze izicwangciso zonyaka omtsha … Ezo ziintsuku apho imozulu kuyaphola xa kufika intwasahlobo iyahluma imithi yonke into izele bubomi xa wonke umntu ekhululekile ukuba aphumle,onwabe kwaye azinakekele emva konyaka esebenza.udiniwe wamkele unyaka omtsha onezithembiso ezininzi kunye nomtsha ukholo…
READ Top những shop quần áo đẹp nhất trên đường Quang Trung Gò Vấp | Kotexpro
Ngeholide yeTet, wonke umntu ufuna ukuba mhle kwaye entsha emehlweni izalamane kunye nabahlobo. Awukwazi ukunxiba iimpahla ezindala, eziphelelweyo ukuze udibane nabantu emva kweentsuku ezininzi ezihlukene, ngoko ke ukuthenga iimpahla ezintsha kubaluleke kakhulu. Ikwayindlela yokuzivuza emva kokusebenza nzima komsebenzi. Ngaba unaso isicwangciso sokuthenga iimpahla zeTet okanye hayi, masifumanise ukuba ungathenga phi ezona mpahla zingabizi kakhulu kwaye zintle kakhulu zika-2022 Tet kwisiXeko saseHo Chi Minh.
1 Imarike yokuthenga iimpahla zoNyaka omtsha eHo Chi Minh City
1.1 Imarike yeHanh Thong Tay
1.2 IMarike yaseCay Go (iMarike yaseMinh Phung)
1.3 Pham Van Hai Market
1.4 Thu Duc Night Market
1.5 Bac Ninh Night Market
2 Ukuthenga isitrato seTet iimpahla kwisiXeko saseHo Chi Minh
2.1 Nguyen Trai Street
2.2 Indlela CMT8
2.3 Le Van Sy Street
2.4 Huynh Van Banh Street
3 Weekend Tet shopping fair
3.1 Imarike yentakumba yaseSaigon
3.2 Molo kwiMarike yeMpelaveki
3.3 Ibala eli-1
Imarike yokuthenga iimpahla zoNyaka omtsha eHo Chi Minh City
Imarike yeHanh Thong Tay
Ifumaneka kwiSitrato saseQuang Trung (Go Vap), iHanh Thong Tay Night Market yenye yezona ndawo zifanelekileyo zokuthenga iimpahla zeTet kubakhenkethi, ngakumbi abantu abancinci, ngoyilo olwahlukeneyo olunje ngeempahla nezihlangu. Le marike inqabile emini, kodwa xa kusihlwa, izibane zesitrato zikhanya xa ukuthengwa kuqalisa ukuxakeka, okuyinyaniso “iparadesi yokuthenga”. Akufanele uye emarikeni ngeempelaveki, ngakumbi ngexesha leTet kuba kugcwele kakhulu.
Iibhegi ezishibhile zihlala zitsala abakhenkethi, ngakumbi abafundi
Ngokuqhelekileyo, indawo yokuthengisela igxile kuphela ekuthengiseni uhlobo olunye lwesinxibo
Iibhegi zezandla ezingaphantsi kwe-100,000 VND
Ifashoni ethengiswa kwimakethi yeHanh Thong Tay ikakhulu inceda iklasi edumileyo, abafundi, ke ixabiso liyafikeleleka kakhulu. I-T-shirts, i-jeans, i-skirts … amaxabiso aqhelekileyo ukusuka kwi-30 ukuya kwi-300 lamawaka e-VND. Iingxowa, iiglasi, iibhanti nazo zihluka kwixabiso ukusuka kumashumi ambalwa ukuya kumakhulu amawaka. Apha akukho kunqongophala kweemveliso zobuhle kubantu abancinci, yindawo ongenakuphoswa kuyo xa uthengela iimpahla rhoqo entwasahlobo.
Imithombo ephambili yempahla apha isuka eThailand, eHong Kong, kwiimpahla zasekhaya zaseVietnam kwaye ikakhulu iimpahla zaseTshayina, ngoko ke ukuba ukhangela nzima, uya kuthenga izinto ezintle ngamaxabiso afanelekileyo.
Imarike yasebusuku ihlala ixinene
Iimodeli ezintsha zihlala zihlaziywa ngokukhawuleza kwaye ngokwahlukeneyo “kubantu abasebenzisa iziyobisi” abathontelana ukuya emarikeni
Ukuya kwimarike yeHanh Thong Tay ikwayindlela yokonwabisa abantu abaninzi abancinci, hayi nje ukuthenga ukuza apha. Uninzi lwabasaqalayo kwiidyunivesithi esixekweni bajonga ukuya kwimarike yasebusuku njengendawo enomtsalane kubakhenkethi efuna ukufunyanwa.
Amanqaku ambalwa xa uthenga kwimarike yasebusuku yaseHanh Thong Tay:
-Njengezinye iimarike ezininzi zasebusuku, kwimakethi yasebusuku yaseHanh Thong Tay, kunzima kakhulu ukuzama iimpahla kwaye inani labathengi likhulu kangangokuba akunakuphepheka ukuba ubusela okanye ukubiwa kweengxowa, kuya kufuneka umeme abahlobo bakho ukuba beze kunye nabo. ubusela ngakumbi ngesihlandlo seTet.
Ukuba uya kwimakethi yeTet, kuya kufuneka upake imoto yakho eCitimart okanye eCoopmart Quang Trung emva koko uhambe kwimarike ukuze ugcine imali yokupaka kwaye uphephe ukugcwala kwabantu.
– Ngokuxhomekeke kwindawo, uneendlela ezahlukeneyo zokuhlawula xa uthenga apha. Izitali eziphezulu kwimarike zihlala zinamaxabiso aphezulu okurenta, ngoko unokuhlawula i-70% okanye ngaphezulu, ngelixa izitali ezisekupheleni kwemarike okanye ikhawuntara yelotho malunga ne-50% ngokuxhomekeke kwinto leyo.
-Ukuze ube nokhenketho lokuthenga olonwabisayo, kuya kufuneka utye kwangethuba, kuba ukukhetha izinto kwindawo enabantu abaninzi kunokukwenza udinwe kwaye ulambe.
Zininzi iindawo ezithengisa ukutya emarikeni onokuthi ugqithe kuzo, kodwa yiba ngumthengi olumkileyo ukwenza ukhetho olufanelekileyo lokutya ukukhusela impilo yakho.
IMarike yaseCay Go (iMarike yaseMinh Phung)
Ifumaneka kwiSitrato iMinh Phung kwiSithili se-6 esinendawo eyi-2,412 m², iMarike yaseMinh Phung yahlulwe yaba ziivenkile ezingama-440 ezithengisa zonke iintlobo zezinto, ngakumbi iimpahla zefashoni. Iimpahla apha zahluke kakhulu, zizityebi kwaye zineendlela ezininzi zoyilo. Nangona kunjalo, le ntengiso idume ngokuba “ngumceli mngeni”, ngoko ke kufuneka ujonge ngononophelo umgangatho weempahla ngaphambi kokuba ubhide ukuze uphephe ukonakaliswa.
Ifumaneka kwisitrato sasePham Van Hai (kwisithili saseTan Binh), imakethi yasePham Van Hai yaziwa ngokuba “yiparadesi yokunxiba yabasetyhini”. Iimpahla kwiimarike zityebile ngemibala, ezahlukeneyo kwiintlobo, ezifanelekileyo iminyaka emininzi. Xa kuthelekiswa neemveliso zeehempe kunye neebhulukhwe, iziketi kunye neengubo zibhekwa njengezinto ezenza umtsalane weemarike. Kuba apha, iilokhwe zithengiswa ngoyilo oluninzi: ewe elula, ephucukileyo, ewe entle, uyilo olutofotofo nalo…
Ukuba ungumntu othanda iziketi kunye neelokhwe, kuya kufuneka ukhethe ukuzithenga kwiivenkile eziphezulu zentengiso. Iilokhwe ezithengiswa apha zinoyilo olungcono kunye namaxabiso aphantsi kuneendawo zokuthengisela ezibekwe nzulu kwimarike. Kodwa ngeehempe kunye neebhulukhwe, iindawo zokuthengisela ezibekwe nzulu emarikeni ziindawo zokuthengisa izinto ngexabiso “elimnandi” ngakumbi.
Thu Duc Night Market
Ifakwe kumbindi welali yeyunivesithi yesizwe, kwisithili saseThu Duc, kwisiXeko saseHo Chi Minh, imakethi yasebusuku yabafundi idume ngezinto zayo ezingabizi kakhulu. Iindwendwe apha ikakhulu ngabafundi beeyunivesithi, abasebenzi bemimandla yemizi-mveliso engabamelwane, ke iimpahla zihlangabezana neemfuno zokuthenga ezinje ngeempahla, izihlangu, iibhegi, ilipstick… Ukongeza kwiimpahla, le marike inendawo yokutyela enezitya ezininzi zazo zonke imimandla kunye neentlobo ngeentlobo zeevenkile zeziqhamo.
Thenga izihlangu eThu Duc Night Market
Iziqholo kunye nezithambiso ziyafumaneka kwiMarike yasebusuku yaseThu Duc
Bac Ninh Night Market
Ukusabalalisa kunye nesitalato sika-Nguyen Ba Luat, isithili saseThu Duc, kufuphi neYunivesithi yeMfundo yezobuGcisa kunye neKholeji yoKwakha yi-market ye-Bac Ninh yasebusuku. Nangona ingadumanga njengezinye iimarike zasebusuku, imakethi yasebusuku yaseBac Ninh yindawo etsala abafundi abaninzi ukuba bathenge iimpahla. Nangona le marike ingekho nkulu, izinto zityebile kakhulu, ngakumbi iimpahla. Nangona kunjalo, i-downside yemarike kukuba akuyi kuba nendawo yokupaka ngaphakathi. Ngoko ke, kungcono ukufumana indawo yokupaka kufutshane uze uhambe uye emarikeni.
Ukuthenga isitrato seTet iimpahla kwisiXeko saseHo Chi Minh
I-Nguyen Trai yindlela edibanisa izithili ezimbini ze-1 kunye ne-5, apho iimpahla ezidumileyo zefashoni ziye zathengiswa ixesha elide. Nangona yenze isitalato sefashoni, icandelo ngalinye lesitrato sikaNguyen Trai linecandelo labathengi elahlukileyo. Indawo yeSithili soku-1 igxile ekuxininiseni kweevenkile ezithengisa iimveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso “encoko”. Icandelo elisuka kwiNguyen Trai – Le Hong Phong junction ukuya kwiNguyen Trai – Ton That Tung intersection, igxile kwezinye iibrand zaseVietnam ezifana neViet Thy, Viet Tien, njl. ixabiso elifanelekileyo.
Nguyen Trai Street: iparadesi yokuthenga iimpahla zeTet
Kunye nesitrato sikaNguyen Trai, iCach Mang Thang 8 ikwasisitrato esixineneyo sefashoni esithandwa lulutsha oluninzi. Ngeevenkile ezininzi zefashoni kunye nezihlangu ezisondeleleneyo, uya kuzikhethela ngokulula iimveliso ezininzi ezifikelelekayo. Nangona kunjalo, intsonkotha yale ndlela kukuba kuhlala kukho ukuxinana kweemoto, ngoko khumbula ukuba uqaphele.
Isitalato i-CMT8: iparadesi yokuthenga iimpahla zeTet
Ecaleni kwesitrato saseLe Van Sy esisuka kwiSithili sesi-3 ukuya kwisithili saseTan Binh luluhlu lweevenkile zempahla kunye nezihlangu ezisondeleleneyo. Iimpahla kule ndawo zintle kakhulu kwaye iivenkile zinokukunika i-5 – 30% yesaphulelo kwixabiso lokuqala ukuba uyakwazi ukurhweba ngobulumko. Ukongeza kwiimpahla, esi sitrato sineevenkile ezininzi zeti yobisi kunye neevenkile zokutya ezikulungele kakhulu ukuba “uphinde utshaje” emva kokuthenga okukruqulayo.
Isitalato saseLe Van Sy: iparadesi yokuthenga iimpahla zeTet
Huynh Van Banh Street
Njengezinye izitalato zokuthenga, isitalato iHuynh Van Banh sikwadume kakhulu kwiivenkile zayo zempahla. Apha unokufumana zonke iintlobo zezinto ezivela kwi-jeans, i-t-shirts, i-t-shirts, iebhatyi, iilokhwe, iilokhwe zepati, iingubo zangokuhlwa, … kunye neentlobo ezahlukeneyo zoyilo kunye nemibala.
I-Huynh Van Banh Street: iparadesi yokuthenga iimpahla zeTet
Ukongeza kwezi zitrato, uNguyen Dinh Chieu, Vo Van Ngan, Hai Ba Trung, Quang Trung, njl.
Weekend Tet shopping fair
Ukongeza kwiimarike zasebusuku okanye izitalato eziphithizelayo, imiboniso yempelaveki ikwayindawo etsala abantu abatsha ukuba baye kuthenga.
Imarike yentakumba yaseSaigon
Isekwe kwi-2011, kude kube ngoku iSaigon Flea Market idale “isikhundla” sayo phakathi kwemiboniso ebanjwa rhoqo kwiSixeko saseHo Chi Minh. Ho Chi Minh. Ukuza kwiMarike yeFlea yaseSaigon, unokuzifumana ngokulula, ungaqhelekanga, umgangatho kwaye ungoyiki ukubamba iimpahla. Rhoqo ngenyanga, iSaigon Flea Market idibana namaxesha ama-2 ngeCawa yokuqala neyesithathu enyangeni.
Indawo: 107 Ton Dat Tien, Phu My Hung, District 7
Molo kwiMarike yeMpelaveki
Molo Weekend Market yindawo yokuhlangana yempelaveki yabantu abancinci, indawo yokonwabisa, yokutya, kunye nokuthenga izinto ezipholileyo, ezizodwa nezingaqhelekanga. Ngokudibana kweevenkile ezingaphezu kwe-160 kunye nezinto ezahlukeneyo zomyili wefashoni, izincedisi, izithambiso, izinto zokuhombisa ekhaya… zihlala zihambelana nefashoni eshushu kakhulu namhlanje, izithembiso zeMakethe yeMpela-veki ziya kuzisa kubantu abatsha intengiso enomdla kunye neyonwabisayo. amava.
Umboniso ubanjwa ngokomndilili kanye kwiiveki ezi-2 eHoa Lu Stadium, kwi-2 Dinh Tien Hoang, kwiWadi yeDa Kao, kwiSithili soku-1.
I-1Spot ibanjelwe kwindawo yokwamkela iindwendwe ye-Victory Hotel kwa-141 Nam Ky Khoi Nghia Street, kwiSithili se-3. I-1Spot ibanjwa kabini ngenyanga, rhoqo ngoMgqibelo nangeCawa. Inqaku elidibanisayo le-1Spot yimpahla, izimonyo, izikhumbuzo, iimveliso zokuhombisa, izixhobo, ngoko unokukhetha ngokulula into oyithandayo.
Ukongeza, le ndawo ikwafumana amanqaku ngenxa yendawo yayo epholileyo kwiholo yesidlo, ene-air-conditioning kwaye kulula ukuyifumana. Nangona kunjalo, i-minus point ye-1Spot kukungabikho kwezitendi zokutya.
Ngaphandle kweMakethe yeMpela yempelaveki, iSaigon Flea Market okanye i-1Spot, kukwakho nemiboniso emininzi efanayo yereferensi yakho efana ne: Thengisa 4share, 2day Sale, Sale Hunter, Saigon Holiday Market…
Previous: 8+ Cách phối quần jean áo sơ mi nam đẹp và chất nhất | Kotexpro
Next: Review Love Beauty And Planet – review dầu gội và dầu xả HOT nhất. Hướng dẫn Love Beauty And Planet – review dầu gội và dầu xả HOT nhất tại Hà Nội , Đà Nẵng , TP. HCM | Kotexpro